Eweghachitere iwu mgbochi na ihe mkpuchi na Romania n'etiti ịwa ahụ COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Romania » Eweghachitere iwu mgbochi na ihe mkpuchi na Romania n'etiti ịwa ahụ COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Romania • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye odeakwụkwọ nke Romania na Ministry of Interior, onye isi ngalaba maka ọnọdụ mberede (DSU), Raed Arafat.
Romania nọ ugbu a n'etiti nsogbu ahụike kachasị njọ kemgbe ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ malitere.
A na-eweghachite usoro mgbochi abalị na ihe mkpuchi iwu na Romania ka ikpe COVID-19 na-agbasa.
Site n'elekere iri nke abalị ruo elekere ise nke ụtụtụ, a ga-amachibido mmegharị mmadụ niile na mba ahụ dum.
Ịnweta ụlọ ọha na ihe omume ọha na eze niile ka a ga-ahapụ naanị ndị nwere 'akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ'.
Onye odeakwụkwọ nke Romania na Ministry of Interior, onye na -ahụ maka ngalaba maka ọnọdụ mberede (DSU), Mara Arafat, kwuputara na gọọmentị mba ahụ na-eweghachite iwu ị na-alọta abalị na ihe mkpuchi n'ebe ọha na eze niile.
"Site na elekere 10 nke abalị ruo 5:00 nke ụtụtụ, a ga-amachibido mmegharị ndị mmadụ na mba ahụ," onye isi DSU kwuru na nnọkọ mgbasa ozi, na-akọwapụta ihe dị iche na mmachi maka ndị gbara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ gbakere na nso nso a na COVID-19.
Romania bụ ugbu a n'etiti nsogbu ahụike kachasị njọ kemgbe ụwa COVID-19 oria ojoo malitere.
Malite taa, iyi ihe mkpuchi ihu dị mkpa na Romania, ma n'ime ime ụlọ ma n'èzí, yana n'ebe ọrụ na n'ụgbọ njem ọha, Arafat kwuru.
Ịnweta ụlọ ọha niile yana mmemme ọha na mmemme niile ka a ga-ahapụ naanị ndị nwere 'akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ'.
Usoro nchịkwa ọhụrụ nke ndị ọchịchị setịpụrụ ga-amalite na Mọnde na-abịa maka ụbọchị 30, Arafat kwuru.
Ọnọdụ ọrịa na-efe efe na Romania na-akawanye njọ ngwa ngwa kemgbe ngwụcha Septemba, mkpuchi ọgwụ mgbochi ezughi oke nke naanị pasenti 30 yana enweghị nnabata nke usoro nchebe bụ isi ihe kpatara ịwa ahụ.
N'izu a, mba ọwụwa anyanwụ Europe debara aha ndekọ ọrịa COVID-19 ọhụrụ kwa ụbọchị nke 18,863, na ọnwụ 574.